Dagaalka Tukaraq Yey Dani ugu Jirtaa?? | SAHAN ONLINE
Dagaalka Tukaraq Yey Dani ugu Jirtaa??
Sida qoreyaal hore tilmaameen Somaliya waxay ka dhalmo daysay inay dhasho Hoggaamiye siyaasadeed oo leh Karti iyo kasmo uu dalkiisa ugu hoggaamiyo dariiqa horumarka oo diiwaanka taariikhda dalka uu ku galo.
Waxaana muhiim ah in aanay jirin cid Somali ah oo raali ka ah, dagaalka ka dhacay Tukaraq kaasoo ah mid u adeegaya dano shisheeye, arrintaasna waxaa loo baahan yahay inuu garto Muuse Biixi oo ku faanay inuu dad Soomaaliyeed laayay.
Waxaa nasiib darro ah in dhalinyarada Somaliyeed ee ku dhimanaysa dagaaladaas aaney dani ugu jirin dalka iyo bulshada Somaliyeed oo dhan, waxaana ka daran burburinta dhaqaalaha faraha badan ee lagu gadayo saanada iyo Gaadiidka Dagaalka, waxaa caqliga Fayow iyo kastamaduba ina tusayaan in ay ku haboon tahay in loo jiheeyo meelaha munaasibka u ah sida wax soo saarka, Cafimaadka, waxbarashada iyo helitaanka biyo nadiif ah iyo in lagu degaameeyodadka barakacayaasha ah.
Shacabka Soomaaliyeed waa shacab Muslim ah, diintuna waxay faraysaa inay xaaraan tahay in la daadsho dhiiga qofka muslimka ah sabab la’aan.
Marka ciidamada laga soo ururiyay Boorame,Berbera, Burco iyo Hargaysa oo guryahoodii laga soo kaxeeyay haday ku dhintaan Tukaraq.Waxaana adduun iyo aakhiraba loo haystaa Muuse Biixi oo Sababay iska horimaadka iyo dhimashada dad Soomaaliyeed oo walaalo ah.
Waxaana xusid mudan in labada Hoggaamiye ee labada maamul ay xambaarsan yihiin fikradaha dowladaha carabta iyo ethiopia oo midna hubka bixinayso midna dhaqaalaha, waa dagaal dano dad kale u adeegaya sida runta ahna ay ku dhimanayaan dadweyne Soomaaliyeed oo wax dan ahi aaney ugu jirin dagaalkaas.
Sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay in dagaalka la joojiyo, arrimaha la isku hayana in wada xaajood lagu dhameeyo (Dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho) Muuse Biixi alle ha dareensiiyo Taladaas toosan.
Xigasho:Wargayaka Kaaha Bari.